China inoti hazvingachengetwi vangu Antarctica asi zvahungava hwakaita zvakavimbika pa 'kukura rugare mari' - China JP Metal & Equipment
Phone: + 086-010-88696156
Chinjikira Slurry Pump
ZJ Filter Press Kudya Pump
G uye GH Series Pump
A05 High Chrome chiwanikwa Wear Parts
kunze kwenyika Market
China inoti hazvingachengetwi vangu Antarctica asi zvahungava hwakaita zvakavimbika pa 'kukura rugare mari'
China akatsvaka kubvisa nezvemhosva vavariro yacho chicherwa-vapfumi Antarctica neMuvhuro, pamwe mukuru vachiti Beijing haana urongwa kutanga kuchera ari kondinendi huru.
China 's kuwedzera mabasa mu polar nharaunda iri rainyanya kukosha sezvo Beijing inoshanyirwa musangano wegore negore rokutanga Antarctic Treaty kokutanga.
Dzimwe nhume 400 dzaibva kunyika 42 uye 10 dzomunyika mitumbi vaipinda Forum, iro ndokupfura kure Monday uye inoguma June 1.
'Pachine mukaha pakati vavariro rugare kusimudzira Antarctica kuti pfuma uye kunzwisisa kwatinoita Antarctica,' Lin Shanqing, mutevedzeri mukuru State Oceanic Administration, vakaudza vatori venhau pamusoro pakachengeteka ichimirira ari Forum.
Lin haana kupindura mubvunzo pamusoro zvaaireva nokuda rugare zvekuvaka kukura asi akasimbisa kuti China Antarctic nzendo 'Kusimbisa boosting kunzwisisa kwedu Antarctic uye kuti vachengetedze zviri nani Antarctic kwezvakatipoteredza.'
'Maererano ruzivo rwangu, China akaita hapana kurongera mugodhi basa muna Antarctica,' Lin akawedzera.
Nyanzvi vakaratidza kunetseka kuti China anovanza ine refu chinangwa mokusvinwa pfuma kondinendi, iyo Antarctic Treaty parizvino unorambidza.
Zvisinei, mumwe dzakati kubva chibvumirano wairambidza mbishi zvinhu nokubviswa basa kubva kondinendi hwozouya yokudzokorora muna 2048.
'2048 sokunge refu nzira kure, asi ... kwave chaitwa kuti Beijing ari kuita refu' hedging 'zano kana kondinendi huchikandwa wakashama Resource kukura, kusanganisira kuchera uye mafuta uye gasi kuchera, mune ramangwana , 'Marc Lanteigne, vachidzidzisa Chinese wokumwe mutemo panguva Massey University, akaudza AFP.
'Zvisinei, panguva ino China ari nekuichengete zvikuru kusimbisa kwesayenzi zvinhu zvayo polar mitemo, kukurudzira kushandira pamwe nevamwe hurumende, uye kupedza zvinonetsa kuti simba revisionist muna Antarctica,' Lanteigne akati.
Various nyika kuramba nezvigadziko muna Antarctica, netariro nzvimbo kwesainzi pasi 1959 remarudzi chibvumirano, icho China akabatana muna 1983.
China parizvino ane mana tsvakurudzo dzemapurisa pamusoro kondinendi uye wechishanu iri aronga kuti 2019, izvo zvaizoita akaisa China iri ndima pamwe US ​​iri nhamba zvigadziko.
'Hosting kumusangano Beijing ndiyo mukana China kuwana kugamuchirwa kwavo (vachangobva) vakakurumbira chinzvimbo mune Antarctic munyaya dzakawanda,' akadaro Anne-Marie Brady, nyanzvi mune Chinese uye polar zvematongerwo enyika paUniversity weCanterbury, New Zealand.
China urege kutsvaka chero kuchinja kuti huripo mutemo Antarctic munguva pfupi iri mberi, Brady akaudza AFP.
Asi iye akati vave 'vasingadi chokuwedzera kuchengetedza matanho, sezvo zvakaratidzwa nokushorwa yavo vaitaura kuti zvomumvura yaidzivirira nzvimbo dziri Southern Ocean.'
Post nguva: May-23-2017
Company: JP METAL & zvinoshandiswa Co., LTD
Address: Headquarter: No.1115, Floor10, No.5 Building, No.18 Yard, Shijingshan Rd.Shijingshan District, Beijing China Plant Add: Equipment Manufacturing Base, Yuanshi County Industrial Park, Shijiazhuang City, China
Phone: + 086-0311-68124201
China inoti hazvingachengetwi kwangu ...
China akatsvaka kubvisa nezvemhosva vavariro yacho chicherwa-vapfumi Antarctica neMuvhuro, pamwe pamutemo shoko BEI ...
Argentina zvakaitika mugodhi itsva the ...
Zviremera Argentine, indasitiri vatambi uye mibatanidzwa vanotarisirwa kusaina svondo rino refu akamirirwa yeUnited mugodhi zvinobvumirana ...
© Copyright - 2006-2106: All Rights Reserved ne Shiyi Pump- Power ne Globalso.com